Nhau - Zvinokonzera uye matanho ekudzivirira ebhandi rekutakurisa bhandi
Zvinokonzera uye zvekudzivirira matanho ebhandi conveyor kutsvedza
1. Kusakwana kwebhandi
Kana bhanhire risina kukakavara kwakakwana, hakuzovi nekukwikwidza kwakaringana kwekumanikidza pakati pechairi chekutyaira uye bhanhire, uye harizokwanise kudhonza bhandi nekutakura kufamba.
Iko kunetsekana kwechigadziko chebhandi rinotakura kazhinji kunosanganisira sikuruu kukakavara, hydraulic tension, inorema sando tension uye mota kukakavara. Sitiroko isina kukwana kana kugadzirisa zvisina kukodzera sikuru kana hydraulic tension mudziyo, isina kukwana counterweight yechinhu chinorema sando tension mudziyo uye mota mhando tension tera, uye jam yemagineti inokonzeresa kusakwana kwekukakavara kwebhandi rinotakura uye kukonzera kutsvedza.
1) Bhandi rinotakura rine mweya kana hydraulic makakatanwa mamiriro anogona kuwedzera kusanzwisisika nekugadzirisa kunetsekana, asi dzimwe nguva kushungurudzika kwekukonana hakuna kukwana uye bhandi rine deformation yekusingaperi. Panguva ino, chikamu chebhanhire chinogona kudimburwa kuitira vulcanization zvakare.
2) Bhandi rinotakura rine rinorema sando kusagadzikana uye mota makakatanwa mamiriro anogona kurapwa nekuwedzera huremu hweanopokana kana kubvisa jam rechimushini. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kana uchiwedzera kumisikidza kwechigadzirwa chemakakatanwa, inogona kuwedzerwa kubhanhire isina kutsvedza, uye hazvina kukodzera kuwedzera zvakawandisa, kuti irege kuita kuti bhanhire rive nekushushikana kwakanyanya zvisina basa uye kuderedza hupenyu hwaro hwebasa. .
2. Dhiramu rekutyaira rakasakara zvakanyanya
Dhiramu yekutyaira yebhanhire rekutakurisa inowanzo kurapwa neRabha kupfeka kana kukanda, uye herringbone kana diamond groove ichawedzerwa pane irabha pamusoro kuvandudza kukakavara coefficient uye kuwedzera kukakavara. Mushure mekumhanya kwenguva yakareba, iyo yerabha pamusoro uye groove yedhirairi yekutyaira ichapfekwa zvakanyanya, izvo zvinozodzikisa kukakavara kwekukwana uye kukweshera kwedhiraini dhiraini pamusoro uye kukonzera bhandi kutsvedza.
Solution: kana zvikaitika izvi, nzira yekumonera zvekare kana kutsiva dhiramu inofanira kutorwa. Mukuongorora kwemazuva ese, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa pakuongorora kuputirwa kwedhiramu dhiraivha, kuitira kudzivirira kuti kupfeka kwakanyanyisa hakugone kuwanikwa munguva, zvichikonzera bhandi kutsvedza uye kukanganisa iko kwakajairika kushanda.
Post nguva: Mar-03-2021